स्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम भए पनि जनताले फरक अनुभूति गर्न पाएनन् « Sansar News
स्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम भए पनि जनताले फरक अनुभूति गर्न पाएनन्
२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०३:०८
२ मङ्सिर ,काठमाडौँ। स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान जारी भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको महसुुस गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हिजो के गर्ने ? भोलि के गर्ने ? एक महिनापछि के गर्ने ? कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुप¥यो । अब यो भएन, त्यो भएन भनेर कर्मचारीले छुटकारा पाउँदैन ।”